ALT Linux P9 XNUMXth Platform Yakaburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura kuvhurwa kwechipfumbamwe ALT Linux P9 chikuva chakapihwa, zvinova bazi idzva rakatsiga re ALT repositori rakavakirwa pane yemahara software Sisyphus repository.
Chikuva chacho yakagadzirirwa kugadzira, kuyedza, kugovera, kugadzirisa uye kutsigira mhinduro zvivakwa zvakaoma zvehupamhi hwakawanda, kubva pamidziyo yakadzika kusvika kumaseva ebhizinesi uye nzvimbo dzedata.
ALT p9 ine package repositories uye zvivakwa zvekushanda pamwe neasere mapurani:
pamusoro ina (synchronous build, open open repositories): x86_64, i586, aarch64 (ARMv8), ppc64le (Power8 / 9)
mamwe maviri (kudzoreredza kuvaka, yakavhurika zvinyorwa): mipsel (32-bit MIPS), armh (ARMv7)
maviri akavharwa (akapatsanurwa kukwirisa, mifananidzo uye zvinyorwa zvinowanikwa kune varidzi vechikwata pachikumbiro): e2k (Elbrus-4C), e2kv4 (Elbrus-8C / 1C +).
Muunganidzwa wezvivakwa zvese ndewekuzvarwa chete seArM / MIPI mifananidzo inosanganisira sarudzo dzekuburitsa paQEMU.
Zvakare nerondedzero yemapurani akasarudzika mapakeji e2k ayo anowanikwa pamwe neruzivo pamatavi akajairwa.
Kubva 2018, iyo Sisyphus isina kugadzikana repository yakatsigira iyo rv64gc (riscv64) kuvaka, iyo ichawedzerwa kune p9 mushure mekuonekwa kweanoshandisa masisitimu mairi.
1 Nezve ALT Linux P9
2 Ungawana sei ALT Linux P9?
Nezve ALT Linux P9
Kuti utange nekukurumidza nePlatform XNUMX, Basalt SPO inopa vashandisi vanosarudza vakazvimiririra kuona mamiriro ekuumbwa uye maratidziro ebhutsu emifananidzo yeanotanga kits yezvivakwa zvinotsigirwa.
Chipfumbamwe chikuva inopa vashandisi uye vanogadzira mukana wekushandisa Elbrus, Meadowsweet, Yadro, Elvis masystem uye inowirirana kubva kuRussia, nhumbi dzakasiyana siyana kubva kune vagadziri vepasirese, kusanganisira ane simba maseva eHuawei ARMv8 uye dzakasiyana ARMv7 uye ARMv8 single-board system (semuenzaniso, nVidia Jetson Nano, Raspberry Pi 2/3 uye Allwinner senge Orange Pi Prime, nepo iyo yePRi4 inoshanda ichienderera).
Iyo huru vhezheni yeLinux kernel (std-def) en iyo nguva yekumisikidzwa iri 4.19.66, nepo iyo nyowani tsanga iri 5.2.9 inowanikwawo.
Musiyano wakakosha kubva p8 iko kushandurwa kweiyo RPM package maneja kune vhezheni 4.13 sechigadziko (yaimbova forogo yakadzika yeshanduro 4.0.4 yakashandiswa).
Pakati pezvimwe zvinhu, inopa rutsigiro rpmlib (FileDigests), iyo yaimbove isipo kubva kune akawanda echitatu-bato mapakeji senge Chrome, uye iyo GNOME Chikumbiro Center yezvitoro zvakakanganiswa.
Dzimwe shanduko dzakaitwawo kuAPT, iyo inotevera inomira.
Rpmlib (FileDigests) tsigiro yaonekwa iyo inokutendera iwe kuisa yechitatu-bato mapakeji (Yandex Browser, Chrome, nevamwe) pasina kuadzosera.
Wakawedzera iyo apt-tora autoremove rairo iyo inobvisa zvese zvinomisikidza zvimisikidzo zvisingachadiwe, uye apt-mucherechedzo utility iyo yaunogona kuratidza pasuru seyazvino / manyore yakaiswa.
Iyo apt-yekuvandudza yekuraira inorambidzwa nekutadza.
kukosha kwekukosha kwe APT :: Cache-Limit inowedzerwa ne 1,5 times.
gadziridza iro ganda rakaputirwa muLua 5.3.
Kugadziriswa kwakawanda uye kugadzirisa.
Tsigiro yemumba crypto algorithms yakawedzerwa uchishandisa openssl-gost-injini. Iyo nyowani gostsum package zvakare yakaonekwa, iyo inobvumidza iwe kuverenga iyo checksum zvinoenderana neGOST R 34.11-2012 algorithm.
Kutarisisa kwakanyanya kwakapihwa emahara magadziriso edziviriro, kusanganisira musangano weSamba wakabatana wakakodzera kuendesa masevhisi efaera uye Anoshanda Dhairekitori dhairekitori.
Docker mifananidzo ye zvivakwa aarch64, i586, ppc64le uye x86_64 anowanikwa pane yepamutemo Docker webhusaiti, nepo mifananidzo yeLXC / LXD pa images.linuxcontainers.org.
Iyo beta vhezheni yeAlt kugoverwa papuratifomu yechipfumbamwe inowanikwa zvakare: Workstation (yakajairwa uye K), Server, Dzidzo.
Shanduro 9.0 yakarongerwa kuwa 2019. Uyezve, ivo vari kushanda pa Simply Linux 9 uye kugovera kutsva.
Pakupedzisira Alt Virtualization Server. Basalt SPO inokoka vese vanogadzira kuti vaedze kuyedza pamwe kuti vave nechokwadi chekuenderana neXNUMXth ALT chikuva.
Ungawana sei ALT Linux P9?
Kune avo vanofarira kuyedza iyi vhezheni itsva yeALT Linux, ivo vanozogona kuzviita. nekuenda kunotevera link, kwaunogona kurodha pasi vhezheni yesarudzo yako nedesktop nharaunda yaunoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » ALT Linux P9 XNUMXth Platform Yakazarurwa
Usafe Nzara Pamwe Chete - Ine Huru Yemahara Gadziriso Inowanikwa